Best kale u music download tufaax app
Alternative Best u Music Apple Download App
Apple music app waa cajiib a geeyo music madal ama app oo awood u caashaqi jiray music si ay u helaan malaayiin heesaha oo dunida ku baahsan. App Tani waxay suuro gelineysaa in aad kala soo bixi songs, la abuuro playlists, share playlists iyo sidoo kale dhagayso raadiyaha music. Iyadoo ay tahay dadka isticmaala macruufka boosteejo ah oo weyn, waxaa jira adeegyo badan oo geeyo music kale oo ku siin tartan wanaagsan. Apple music app waa badan oo ku saabsan ogaadeen heeso cusub iyo fanaaniinta tan iyo markii ay timaado lacagta ah curation aadanaha laakiin waxaa jira barnaamijyadooda kale oo badan oo u adeegi karaan barnaamijyadooda geeyo sida weyn oo aan ku koobnayn oo keliya ee macruufka isticmaala.
Lugood Music app ka shaqeeyaa iPod taabto, iPhone iyo iPad laakiin waa keliya haddii ay hindiseen la cusbooneysiiyaa in nooca ugu dambeeya kaas oo macruufka 8.4. Waxa kale oo ka shaqeeya PC iyo Mac. Laakiin barnaamijyadooda kale geeyo music shaqayn karo qalabka kala duwan, eegin nidaamka qalliinka lagu rakibay gudaha. Iyadoo app music Apple ay qabtaan shaqo aad u weyn, waxaa muhiim ah in ay sidoo kale ka fiirso barnaamijyadooda kale si aad u dhigi kara doorashada ugu fiican ee ugu habboon naftaada.
Wondershare TunesGo -Best duwan oo loogu talagalay music download tufaax app
Haddii aad raadinayso duwan Music download Apple ee app, ka dibna mid ka mid ah fursadaha ugu fiican ee aad u waa TunesGo Wondershare. Tani waa app ah aad kaas oo nuqul ka kartaa music, videos, playlists ka iPod, iPad, iPhone maktabadda Lugood iyo in aad PC u gurmad ujeedada. App Tani asal ahaan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan music maktabad qalab ee qalabka macruufka, Lugood iyo PC aan dhibaatada ka dhex marayay Lugood inay sidaa sameeyaan. Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah muuqaalada madal this.
Iyadoo app this, waxaad u baahan tahay oo dhan si ay u sameeyaan waa in ay si fudud ku xidhi qalab iyo share music oo dhan faahfaahinta heeso iyo aan laga badinin tayada audio.
App Tani waa awood u qaadaan oo dhan tus iyo koobiyada kaliya ee files oo aan jirin maktabadda ee Ahaado.
Wondershare TunesGo Sidoo kale waxaa suuragal ah in aad dib u dhiska maktabadda Lugood aad haddii aad leedahay PC cusub ama soo gaaray nooc gaar ah oo dhibaato nidaamka ama shil.
Tani app music qaybsiga sidoo kale bixisaa muujinta ah ee la wadaago music ka iCloud. Music ka sokow, waxa kale oo aad la wadaagi karto videos in laga soo iibsadey ID ah tufaax kala duwan. Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay oo dhan si ay u sameeyaan waa in ay si fudud u jiidi oo hoos u maktabadda aad xulan.
App Tani ama madal bixisaa muujinta cajiib ah oo si toos ah diyaarinta iyo macluumaad fiican song. Waxay bixisaa awood u baadha audio database taas oo la mid ah oo loo isticmaalo ama looga faa'iideysan by Lugood.
Music ka sokow, qaar ka mid ah waxyaabaha kale ee aad ku wareejin karaa iyada oo app waxaa ka mid ah farriimaha, xiriirada iyo noocyada kale ee files.
App Tani waxaa laga heli karaa labada on Windows iyo Mac iyo yimaado iyadoo ay xulashada ah oo maxkamad xor ah iyo sidoo kale.
> Resource > Music > Alternative Best u Music Apple Download App